तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीको डायलासिस गरियो
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे र प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिब्या सिंह शाहले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ओलीको अवस्था अहिले राम्रो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा तेस्रोपटक डायलासिस गरिएको छ । शनिबार विहान स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल पुगेका उनि डायलासिस गरेर अपराहृन बालुवाटार फर्किएका हुन् ।
यसअघि मिर्गौलाले राम्रोसँग काम नगरेपछि १३ कात्तिकमा ओलीले ग्राण्डीमा नै पहिलो पटक डायलासिस गराएका थिए । लगतै भोलिपल्ट दोस्रो डायलासिस गरिएको थियो ।